Sady mandroba no mampihorohoro : vehivavy roa nataon’ny dahalo 600 lahy takalon’aina | NewsMada
Sady mandroba no mampihorohoro : vehivavy roa nataon’ny dahalo 600 lahy takalon’aina
Faritra ianjadian’ny asan-dahalo mahery vaika Ambatofinandrahana. Telo andro lasa izay, dahalo 600 lahy be izao no voalaza fa nanafika tao amin’ny kaominina Mandrosonoro. Ankoatra ny omby marobe voaroba, lasa nataon’ireo dahalo takalon’aina ny vehivavy roa tao an-tanàna…
Raikitra indray ny fanafihan-dahalo ao amin’ny distrikan’Ambatofinandrahana. Lasa avokoa ny ankamaroan’ny omby rehetra tao amin’ny fokontany Ambalanivo sy Ambalambony, araka ny fampitam-baovao voaray avy any amin’iny faritra iny. Fa telo andro lasa kosa izay, dahalo 600 lahy indray nanafika tao amin’ny kaominina Mandrosonoro, Ambatofinandrahana. Tsy vitan’izay fa mbola naka ankizivavy roa natao takalon’aina koa ireo dahalo tamin’io fotoana nitrangan’ny fanafihana io. Misy, araka izany, ny hetsika iarahan’ny zandary avy ao amin’ny fari-piadidian’ny zandarimariam-pirenena ao Fianarantsoa sy ao Toliara amin’ny fanakanana ny lalan’ireo dahalo mitondra ny omby. ”Niarahantsika nahita tokoa ny zava-niseho tao amin’ny kaominina Mandrosonoro satria notafihin’ny dahalo anjatony ny tanàna manodidina. Anjatony ireo omby very niampy ireo olona roa takalon’aina mba hanakanana ireo mpanara-dia. Nisy ny fifandonana ka navelan’ireo dahalo ihany ireo takalon’aina ary efa tafaverina any amin’ny fianakaviany. Ny zanaky ny tompon’omby ihany ireo lasa takalon’aina ireo. Mbola mitohy kosa ny fanarahan-dia ataon’ny zandary amin’izao fotoana izao”, hoy ny fanazavan’ny lehiben’ny vondron-tobim-pileovan’ny zandarimariam-pirenena ao
Amoron’i Mania, ny Kly Randrianarivelo Anicet. Efa nisy, araka izany, ny ”Opération Mazava” nataon’ny mpitandro filaminana teo aloha nandritra ny roa volana mba hampandry fahalemana ny tany amin’iny faritra iny, saingy niverina indray izany. Manampatra ny heriny hatrany ireo dahalo.
Asan-dahalo tsy ahitam-bahaolana…
Mihena ny isan’ireo zandary nony efa vita ny ”Opération Mazava” ka eo no somary mampanano sarotra ny fanenjehana, araka ny fampitam-baovao voaray hatrany. Misy ihany ireo zandary vao nivoaka tao amin’ny sekolin’ny zandarimariam-pirenena Ambositra ary nalefa any amin’ny faritra mena amin’ny asan-dahalo avokoa ny ankamaroan’izy ireo. Isan’ireo nahazo betsaka ny tao amin’ny faritra Amoron’i Mania, araka ny fanampim-panazavana nomen’ny Kly Randrianarivelo Anicet.
Mahatsiaro ny filaminan’ny tanàna tamin’ny fotoana nahalehiben’ny kaompania ny zandary ao Ihosy, ny Kly Lyllison de René (kapiteny izy tamin’izany fotoana izany) koa ny mponina ao amin’ny faritra Ihorombe. Natahotra ity manamboninahitra ity avokoa ny ankamaroan’ireo dahalo ka nandry fahalemana tanteraka ny tanàna. Nomarihin’ny solontenan’ireo mponina ao Ihosy fa ”Ravolontanana” ny anaram-bosotry ny Kly Lyllison ary fantatry ny dahalo ny lazan’ity manamboninahitra ity ka nifitsaka tanteraka ry zalahy. Isan’izany ny tao Ikelihorombe. Tsy azo hadinoina fa tamin’ny andron’ny filoha teo aloha, Ravalomanana Marc, izany. Nilamina ny tanàna tamin’izany raha mitaha amin’izao fitondrana izao. Amin’izao anefa, mitaintaina ny mponina ao Ihosy sy ny manodidina. Andrenesana asan-dahalo hatrany isan’alina. Manginy fotsiny ireo tompon’omby maty voatifitry ny dahalo. Tsy manana drafitra maty paika hiadiana amin’ny asan-dahalo mihitsy ny fitondrana amin’izao nefa efa tsimponin’ny dahalo hatramin’ny mpitandro filaminana aza. Tsy ahitan-teny mihitsy koa ny praiminisitra sy ny ”gouvernement de combat”. Ny dahalo indray ny manao ”combat” amin’ny mpitandro filaminana efa manao sorona ny ainy.